Ka-reebitaanka jasiiradaha Giriigga jadwalka duulimaadyada cusub waxay dhaawici kartaa dhaqaalaha dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ka-reebitaanka jasiiradaha Giriigga jadwalka duulimaadyada cusub waxay dhaawici kartaa dhaqaalaha dalxiiska
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Giriigga • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xilliga Griiga ay isu diyaarineyso soo dhaweynta dalxiisayaasha kadib markii si kumeel gaar ah loo xiray, jasiiradaha qaar ayaa laga reebi karaa jadwalka duulimaadka maadaama shirkadaha duulimaadyada ay bilaabayaan inay adeegaan adeeg dhimis ah. Helitaan la'aanta jasiiradaha qaarkood waxay dhaawac u geysan doontaa ganacsiyada maxalliga ah ee tafaariiqda, dalxiiska iyo soo-dhoweynta, marka lagu daro seddexdii bilood ee hore ee la xiray warshadaha dalxiiska.
Diyaaradaha waaweyn ee Yurub sida EasyJet iyo Ryanair dhawaan ku dhawaaqday qorshayaal ay dib ugu bilaabi doonto jadwalka duulimaadkeeda- laakiin in ka yar kalabar uun. Tani waxay sababi doontaa in meelaha qaar loo daayo inay xooga saaraan jidadka caanka ah, ee macaash doonka.
Dalxiiska soo galaya waa tiir muhiim u ah dhaqaalaha Griiga, maaddaama jasiirado badan ay si weyn ugu tiirsan yihiin booqdayaasha sanadka oo dhan, gaar ahaan bilaha xagaaga soo socda. Sannadkii 2018, Giriiggu wuxuu soo dhoweeyay 6.2 milyan oo soo booqdayaal ah suuqyadeeda ugu waaweyn - Jarmalka iyo Boqortooyada Ingiriiska, taasoo muujineysa sida shirkadaha duulimaadyada ku saleysan ee Yurub ay muhiim ugu yihiin guusha Giriigga iyo jasiiradeeda inay u socdaan.
Qaar ka mid ah jasiiradaha Griiga ayaa ka soo gudbay dhibaatooyin 'overtourism' oo aan u gudbin dhibaatooyin dalxiis. In kasta oo markii hore dabeecadda iyo xasilloonida qaar ka mid ah jasiiradaha Giriigga ay burburiyeen dalxiisayaashu, haddana aad bay u deggan yihiin, iyada oo aanay jirin cid soo booqata oo wax dakhli ah siisa milkiileyaasha ganacsiyada. In kasta oo loo baahan yahay dalxiisayaal ka yar, tani maahan ikhtiyaar macquul ah oo cimri dherer ahaan jasiiraduhu u yihiin goobo dalxiis.
In kasta oo duulimaadyadii caasimadda iyo Jasiiradihii caanka ahaa ee Giriigga ay dib u bilowdeen, jasiirado lagu yaqaan dabeecad fog iyo xasillooni ma lahayn - ama mararka qaarkood ayay leeyihiin, laakiin waxay noqdeen hoos u dhac soo noqnoqday. Tani waxay yaraynaysaa helitaanka soojiidashadaan caanka ah. Adeegyada doomaha ee jasiiradaha iyo hareerahooda sidoo kale saameyn ayay ku yeesheen Covid-19, halkaasoo hawlgalkeedu yahay awood dhan 50%, oo leh baaritaanka kuleylka iyo shahaadada caafimaadka ee looga baahan yahay safarka doonta.
Intaas waxaa sii dheer, maraakiibtu hadda ma shiraacanayaan oo kuma joogsanayaan jasiirado Giriig ah, iyagoo tirtiraya tiro ka mid ah booqdayaasha maalinlaha ah iyo dakhliga ka soo gala warshadaha horay u saameeyay. Doomaha loo dalxiis tago waxay sidoo kale dhiirrigeliyaan safarada soo noqnoqda, taas oo hubinaysa in dakhli joogto ah soo galo oo khatar gelin kara haddii marin loo helo jasiiraddan.
# dib u dhiska